Kyaw Linn – Page2– MYANHOUSE
Author: Kyaw Linn
သစ်မွှေး/ အကျော် (Agarwood)
နံ့သာမျိုးငါးပါးဖြစ်သည့် နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီ၊ ကရမက်၊ အကျော်၊ စမ္ပာ တို့တွင် ‘အကျော်’ ဟူသော သစ်မွှေးလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်၏။ အမည်အားဖြင့် ‘သစ်မွှေး’ ဟုခေါ်တွင်သော်လည်း သစ်မွှေးသည် စင်စစ်အားဖြင့် အပင်သားမှ မူလအတိုင်းအမွှေးရနံ့ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သစ်မွှေးသည်မျိုးရင်း Thymelaeaceae တွင်ပါဝင်သော မျိုးစိတ် Aquilaria သစ်မွှေးမျိုးဖြစ်ကာ သဘာဝအလျောက် အဆီခဲဖြစ်တည်နိုင်သော အပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအပင်သည် တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်၏ ဦးချို၊ အစွယ်စသည်တို့ဖြင့် ထိခိုက်မိခြင်း၊ ခြ၊ နဂျီစသော ပိုးကောင်များမှ အိမ်ဖွဲ့ခြင်း၊ သဘာဝဘေးကြောင့် သစ်ကိုင်းကျိုးကျခြင်းစသည်တို့ကြောင့် အပင်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြီး ထိုဒဏ်ရာကို မှိုစွဲခြင်းမှ အဆီခဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သုတေသနဖော်ပြချက်များအရ သဘာဝအားဖြင့် သစ်မွှေးပင် (၁၀) ပင်လျှင် (၁) ပင်သာ အဆီခဲဖြစ်တည်နိုင်သည်။ အဆီခဲဖြစ်တည်နိုင်သည့် အပင်မှာလည်း သက်တမ်းအနည်းဆုံး နှစ် (၃၀) မှ (၅၀) အထိရှိမှသာ ဖြစ်တည်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။ ထိုအဆီခဲများကို ပေါင်းခံချက်လုပ်ရာမှ ‘သစ်မွှေးဆီ’ ကို ရရှိသည်။
‘သစ်မွှေးဆီ’ သည် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောရေမွှေးရရှိစေရန် အနံ့ချုပ်ရာတွင် အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည့်ဆေးဝါးတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရခြင်း၊ AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဖော်စပ်ရာတွင် အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်နေခြင်း အစရှိသည်တို့ကြောင့် ယနေ့ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ‘သစ်မွှေး’ ၀ယ်လိုအားမြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သစ်မွှေးကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ကျော်ခန့်ကပင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး မံမီရုပ်အလောင်းများစီရင်ရာတွင် သစ်မွှေးအဆီခဲအား အဓိကအသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း မှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြကြသည်။ ဂေါတမရှင်တော်ဘုရား၏ ရုပ်ကလာပ်တော် တေဇောဓာတ်မီးလောင်ကျွမ်းရာ၌ ရှစ်ပြည်ထောင်မင်းတို့က သစ်မွှေးဆီခဲများကို အလေးအမြတ် ပူဇော်ခဲ့ကြကြောင်း သုတေသီများက ဖော်ပြထားသည်။ အိန္ဒိယ အာယုဗေဒကျမ်းများတွင် အသက်ရှည်ဆေးအဖြစ် သစ်မွှေးဆီများကို မီးရှို့ရှူရှိုက်ပါက ရောဂါဘယကင်းစေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြင့်စေသည့်အပြင် စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းမှုကို ပေးနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် သစ်မွှေးကို မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အင်အားချိနဲ့ခြင်း၊ အသက်ရှူမ၀ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကြပ်၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ သွေးချို၊ အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ အသဲရောဂါ၊ အသဲခြောက်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အစာမကြေခြင်း၊ အစာအိမ်ရောဂါ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ လေးဘက်နာ၊ စသည့်ရောဂါများသာမက အသက်ရှည်နုပျိုဆေးအဖြစ် တိုင်းရင်းဆေးကောင်းတစ်ပါးသဖွယ် အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။ သစ်မွှေး၏ ဆေးဘက်ဝင်သည် များပြားသောကြောင့် ဆေးဝါးများဖော်စပ်ရာတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
သစ်မွှေးကို ပြင်သစ်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဟော်လန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမဏီ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ လက်ဘနွန်၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ စင်္ကာပူ၊ အိန္ဒယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံတို့တွင် ဆေးဝါး၊ သောက်ဆေး၊ ကုန်ကြမ်း အမွှေးနံ့သာကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲတော်များတွင်လည်း သစ်မွှေးကို အမွှေးနံ့သာအဖြစ် အထွဋ်အမြတ်ထား၍ ပူဇော်ကြသည်။
သစ်မွှေးအမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် မြန်မာ့သစ်မွှေးသည် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနှင့် ဈေးအကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
သစ်မွှေးအမျိုးအစား (၁၅) မျိုးခန့်ရှိသော်လည်း Aquilaria, Crossnar နှင့် Aquilaria Malauenis အမျိုးအစားနှစ်မျိုးမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းတို့ကို တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် တွေ့ရှိရပါသည်။
သစ်မွှေးပင်ပေါက်ရောက်ရာဒေသများမှာ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသများဖြစ်ကြသည်။ အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ ဘူတန်၊ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒိးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သီရိလင်္ကာ နှင့် သြစတေးလျကျွန်းစုအချို့တွင် သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Aquilaria Agalocha Roxb နှင့် Aquilaria Malaccer Lam တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်မွှေးပေါက်ရောက်ရာ ဒေသများမျာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
Agarwood is highly valued in Myanmar as one of the five rare well-known and special fragrant woods and known as ‘Thit Hmwe’ or ‘Akyaw’. (Thit Hmwe – ‘Thit’ > Wood, ‘Hmwe’ – Fragrant). Agarwood is not an original fragranced wood though it is called ‘Thit Hmwe’ in Burmese. It is only the tree in the family of Aquilaria in Thymelaeaceae and can produce the aromatic resin.
When the tree was attacked by the animals or by any chances of damage, the infection on the scar withatype of mould produced the dark aromatic resin in its heartwood.
Researches show that only one out of ten trees can be successfully infected for resin. And the only trees aged above 30-50 years can produce the resin. Distilling of that dark aromatic resin resulted highly valuable and priceless agarwood oil.
Demands on agarwood oil is getting higher as it is the main perfect element for producing special perfume, and also being one of the main element for Anti-AIDS medicine.
Historical facts show that, agarwood have been preciously used widely in the past 2000 years ago and it is to believe that it was mainly used in forming mummies in the time of Egyptian.
Historical findings in the time of Buddha also said that kings of the eight kingdoms burned this special aromatic wood to show the high sorrow and respect at the cremation of Buddha.
Indian medicinal thesis shows that the aroma therapy using fired agarwood can be as the anti-aging agent and help the freshness of body and inner mind.
Agarwood extracted oil and other forms of its are widely using in the medical field for verity of diseases for heart, kidney, stomach, hypertension, liver, nervous system and other muscle and joint problems of the body. And people use agarwood as the anti-aging agent.
Since the medicinal value and effectiveness of agarwood is wide and high, it is used in many medicines.
Agarwood is used not only as the medicated natural aromatic oil, it is also use as the special fragrant in religious ceremonies across France, United State of America, Canada, Holland, England, Germany, Japan, Korea, Lebanon, China, Taiwan, Singapore, India, Pakistan, Sri Lanka and Saudi Arabia.
Among all the different species in the family of Agarwood, Agarwood from Myanmar is best in quality and got high demand in the market.
Aquilaria Crossnar and Aquilaria Malauenis are the best out of 15 different types of Agarwood. And those two are found in Thanintharye region and Kachin state in Myanmar.
Agarwood can be found in Southeast Asia and Asia Pacific regions.
Natural Agarwood can be found in India, Nepal, Bhutan, Myanmar, China, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka and the islands of Australia.
In Myanmar, Aquilaria Agalocha Roxb and Aquilaria Malaccer Lam are recorded as the marketable and quality Agarwood. Agarwood can be found in Kachin, Shan, Chin, Kayar, Sagai, Bago and Thanintharye in Myanmar.
Author Kyaw LinnPosted on April 18, 2019 April 18, 2019 Categories AgarwoodLeaveacomment on သစ်မွှေး/ အကျော် (Agarwood)
သစ်သားပန်းပု (Wooden Sculpture)
Wooden sculptures of Myanmar (Scroll Down for English)
မြန်မာ့ရိုးရာ ပန်းပုလက်ရာတွေရဲ့ ခမ်းနားမှုကို MYANHOUSE က ဂုဏ်ယူစွာတင်ပြခွင့်ပေးပါနော်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သစ်သားထွက် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း နိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝမှုအပြင် အနုပညာအဆင့်အတန်းကိုပါ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတဲ့ပြနိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပြယုဂ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ အပြိုင်အဆိုင်တိုးဝှေ့နေရာယူလာကြတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကိုယ့်ရဲ့မူလ၊ ဇာတိ၊ ကျောရိုးသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အတတ်ပညာတွေကို ထိန်းသိမ်းမြတ်နိုးကြဖို့လည်း MYANHOUSE က တိုက်တွန်းပါရစေ။
Let us be proud to present the greatness of Myanmar traditional sculpture. It is not only the traditional skill of our people but also the symbolization of our richness in wood and the role of cultural value.
When all the physical accessories are bombing and attracting you today, let us kindly remind you to stay with your origin, love it and value it.
Author Kyaw LinnPosted on April 1, 2019 Categories Wood WorksLeaveacomment on သစ်သားပန်းပု (Wooden Sculpture)
မြေအိုးပန်းချီ (Pot Painting)
လက်မှုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် Myanhouse ရဲ့ ‘အိုးပန်းချီ’ လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းထွက် အိုးငယ်လေးတွေပေါ်မှာ မြန်မာ့ရိုးရာပုံရိပ်လေးတွေကို ဆေးရောင်စုံနဲ့ အလှဆင်ထားတာမို့ အိမ်အလှဆင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စားပွဲပေါ်အလှတင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်ပါတယ်။ အချို့အိုးငယ်လေးတွေပေါ်မှာ ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးတွေရဲ့ အကြောင်းအရာကို စာတိုလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြထားလို့ ကြည့်မိသူတိုင်း ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကို လေ့လာနိုင်မှာပါ။ အခုလို မြန်မာ့ရိုးရာလည်းဖြစ် အလှဆင်ဖို့လည်း ဆန်းသစ်တဲ့ အရွယ်စုံ၊ ပုံစံစုံ အိုးငယ်လေးတွေကို Myanhouse မှာ လာရောက်ကြည့်ရှုဝယ်ယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
Let us introduce our Myanmar craft lovers with ‘Pot painting’ we have here at Myanhouse. Painted on local made pots with figures of Myanmar traditions in different shapes are good to decorate your home or tables. Short descriptions on some pots also help viewers learn shortly and briefly about Myanmar cultures. So come and havealook at our stunning painted pots in different designs, sizes and shapes here at Myanhouse.
Author Kyaw LinnPosted on April 1, 2019 Categories Pot PaintingLeaveacomment on မြေအိုးပန်းချီ (Pot Painting)